Waaxda Socdaalka oo la eedeeyay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waaxda Socdaalka oo la eedeeyay
La daabacay måndag 26 september 2011 kl 16.33
Waaxda socdaalka ayaa maanta waxaa loo jeediyay eedeyn ku saabsan sida loola dhaqmo caruurta ama dhalinyaradda da’da yar ee keligooda yimaada Sweden si ay ugu helaan magan gelyo.
Wareysiga ugu horreeya ee howsha la xiriirta magan gelya siinta ayaa inta badan waxaa lala yeeshaa caruurta ama dhalinta da’da yar ee keligood yimaado Sweden iyada oo aysan goobta joogin wax qareen iyada oo isla arrinkan wareysiga kowaad ee horudhaca dartiisa la sheegayo in magan gelyada uu dalbaday qofkani da’da yar loogu diido in la siiiyo.
Emmy Iversson oo ka tirsan xafiis ka shaqeeya arrimaha magan gelyo doonka ayaa sheegtay haddi warbixinta ilmaha uu bixiyay ay ka duwantahay mida lagu salleeyay diidmada ay taasi noqoneyso arrin aan habooneen.
-Inta badan wareysiga kowaad waxaa lala yeeshaa caruurta aan la wehlinin iyaga oo daalan oo aan diyaarsanen waayo waxay soo galaan safar dheer, ayay tiri Emmy Iversson.
Qareeno ay lahadashay laanta P3 ee idaacadda qaranka ayaa iyagu sheegay in waaxda socdaalka ay ka faa’ideysato daalka faraha badan ee caruurta aan la wehlinin si ay u siiso diidmo ama ay ugu diidaan sharciga deganaanshaha.
Emmy Iverson ayaa iyanaku raacsana Qareenada fekerkaasi.
- Xaqiiqda waa ay sammeeyaan sidaasi waaxda socdaalka mana ahan arrin gaar ah oo caadi aheyn. Waxaan arkay caruur iyo dad qaan gaar intaba oo sidaasi ku dhacday oo ay kala duwan yihiin hadaladda diidmada lagu siiyay iyo kuwa ay dhaheyn, ayay tiri Emmy.
Nevine Mawati oo iyana ah madaxa qeybta magan gelyo doonka ee xafiiska waaxda socdaalka ee Malmö ayaa dhankeeda ku doodaysa in wareysigaasi kowaad uu yahay mid kooban laakiin sidaasi oo ay tahay warbixinta uu markaasi sheego qofka ay aas aas u tahay baaritaanka lagu sammeynayo codsiga magan gelyo doonka waxayna Nevine sheegtay in iyada aysan wax dhibaato ugu muuqan in wareysigaasi lala yeesho qofka.
- Waryesiga waa mid aad u kooban oo aynu ku ogaaneyno micnaha qofka uu ku doonayo magan gelyo marka xaqiiqdii ma garan karo waxa ay eedeyntani tahay. Xogta kooban ee qofka maganlyo doonka ah aan ka qaadno waa mid aan aqrisano si aan wax ugu ogaano kiiska qofka magan gelyo doonka.